Ulwimi olungcono lolutsha 2015 - Ngubani u-Alpha-Kevin?
Ulwimi olungcono lolutsha ngo-2015
Okokuqala, "u-Alpha-Kevin" uya kubuhlungu ukuba angabandakanyeli kwiqela elithi "uLutsha lweLizwi loNyaka." Leli gama labonakala libandlulula abantu abathiwa nguKevin. Kutheni le nto kwaye yiyiphi "i-Alpha-Kevin" empeleni ifanele ukuthetha-siya kufikelela kuloo nto.
I-Langenscheidt, umshicileli wesichazizwi, amaJamani avota rhoqo ngonyaka "kwiLizwi loLutsha loNyaka," ngokuhambelana nokukhululwa kwegama elithi "uLwimi loLutsha". Ivoti iyashintshelwa kwindalo yonyaka kwaye igxininisa kakhulu kunyaka wolwazi emva konyaka.
Kubantu abadala, elithi "Ulwimi lolutsha" izichazili kunye "neLizwi loNyaka" likhumbuza ukuba ulutsha luhamba ngokukhawuleza. Ngabantu abaqala kwiminyaka yabo-20 bahlala becinga ukuba zithini ukuba la mazwi anqamlekileyo, imigaqo kunye neendlela ezidibeneyo. Abaphumeleleyo "ii-Word Youth Year" zangaphambi kweevoti bezimpawu ezifana nale:
Abaviwa kwiLizwi lesiJamani loNyaka
"Läuft bei dir" (2014) - Eli gama liguqulela phantse "upholile." Okanye "indlela yokuhamba."
"Babo" (ngo-2013) - "Babo" ngokubhekiselele kumagama aseBosnia ngoyise, kodwa, phakathi kwamaJamani amancinane asetyenziswa ngentsingiselo yomphathi okanye inkokheli.
"YOLO" (2012) - Isivakalisi esithi "Wena Hlala Kanye Ngesinye Kanye" - enye yezinto ezininzi "iiNgelosi" ezifudukela kwisiJamani nge-intanethi.
"Swag" (2011) - Esinye isandi samagama esidolophini esamkelwe kwisiNgesi. "I-Swag" ibhekisele kwisibheno esicacileyo okanye esilula.
Iminyaka yokugqibela kunye nokunyuka kwamajelo asekuhlaleni baye babonisa ukuba igama eliphumeleleyo lempikiswano yeLangenscheidt liya kwenza ingcamango yalo kwi-culture yaseJamani, ihambe ngolwimi lolutsha. Oko kuthetha ukuba siyavuya kakhulu ngelivoti lonyaka.
Nolu uluhlu olufutshane lwamagama aphezulu aphezulu kwi-poll ka-2015:
" Merkeln " -Ukukhetha ukuvota kuze kube ngoku, "i-merkeln", eqinisweni, ibhekisela kwisicatshulo sezopolitiko sika-Angela Merkel ngesigodi sezopolitiko. Uyaziwa ngokuhlala ecelwa ukuba athathe indawo ecacileyo, enze izigqibo, okanye aze aphendule nemiba yoluntu yangoku. Ngaphezu koko, "merkeln" iguqulela "ukungenzi nto". Yiyiphi intetho yaseJamani ebizwa ngokuthi "merkeln", amaqondo aseJamani kunye namaphephandaba athi "iMerkelismus" (ngokukodwa i-merkelism). Mhlawumbi kuba kungekhona nje amaJamani amancinci athathela "i-merkeln" echaza ukuba i-term leads in the voting popular. Igama elithi "Merkeln" empeleni akuyilo lide kuphela eliye lavela kumagama abapolitiki, umz. , Owayengumphathiswa wezoKhuselo igama likaKarl-Theodor zu Guttenberg liye lahlaselwa "kwi-guttenbergen," oku kuthetha "ukukrapha" okanye "ukukopisha" ebhekisela kuhlazo lweGittenberg. Lowo owayengumongameli waseMelika u-Christian Wulff, enyanzelekile ukuba asule phantsi kwizenzo ezikhohlakeleyo, omnye usopolitiki owaziwayo uhlekisiwe ngenxa yokuphazamiseka kwakhe. Phakathi kobuqhetseba benkohlakalo, uWulff wabiza umhleli weBild , isiqendu esithandwa kakhulu kwisiJamani, ukuba amkholise ukuba angabhengezeli ibali malunga nokubandakanyeka kweWulff, kodwa wafika kwi-imeyli ye-imeyile yegama esikhundleni sakhe, ngoko wayishiya i-imeyile yeposi. I-imeyile ye-Wulff ye-imeyli iye yavela kwi-media.
Wonke umntu uhleka kwaye "u-wulffen" uthetha ukushiya loo meyile yezwi.
" Rumoxidieren " -Igama eliguqulelwe ngokuthi "ukukhupha", eli gama livela kwinkqubo yamakhemikhali ye-oxidizing. Khawucinge ukuba iinqanawa ezindala ezixutywayo ziba yinqumbo.
Igama elithi "Earthporn" -Inye igama lesiNgesi, kulo mzekelo omnye umgama omde "wezononophelo" ezidalwe kwimidiya yoluntu. Ukususela kwi "bookporn," ekubeni ukhangele imifanekiso emihle yeencwadi
kunye nee-bookshelves, "kwi-cabin porn", ejikeleza imifanekiso yeekhenkethi ezikude kunye neendawo zokuhlala, kukho njalo, akukho nto ayikho kwi-intanethi. Ngaloo ngqiqo, "u-pornography" ngokuyisiseko ligama lokujonga imifanekiso enqwenelekayo yeendlela ezahlukeneyo zesihloko esifanayo. "I-Earthporn," elingana ne "Nature Porn", ibhekisela kwimimandla emihle.
"U-Smombie" -Ulo ludibaniso lwamagama "I-Smartphone" kunye ne "Zombie." Libhekisela kubantu abahamba ngezitalato bengaboni apho baya khona, kuba babheka kuphela kwisikrini sabo sefowuni.
"I- Tinderella " -Ili gama elincinane lezesondo lichaza intombazana okanye umfazi osebenzisa ngokugqithiseleyo ama-app-dating okanye amaqonga afana neTinder.
Nangona ndivuyela kakhulu "i-merkeln," igama eliyintanda kakhulu "ngu-swaggetarier". Libonisa abantu abadla imifuno kuphela ngenxa yezizathu zomfanekiso, "abaxoxiweyo" bathetha njalo.
Impembelelo yoLwimi lwesiNgesi
Amagama amaninzi entetho yethu yentsha esekelwe kwisiNgesi ngokuqinisekileyo ibonakalisa impembelelo ye-Anglo-American kwiJamani. Imbali yaseJamani, iUnited States ne-UK isondelelene kakhulu, ngakumbi ukususela kwiMfazwe yehlabathi yesiBini, ingcaciso enokwenzeka malunga nefuthe elikhulu lwesiNgesi kwiinkcubeko zaseJamani kunye nenkcubeko ye-pop. Eyona nto imangalisa ngayo ukuba mangaphi amagama omboleko kunye ne "denglish" maxwebhu awenzayo ayenze kwiJamani nasezidolophini ezahlukeneyo.
Ngaba i-Slang kufuneka ibe yiPolitiki ngokuchanekileyo?
Ewe, kuthekani ngo-"Alpha-Kevin"? Intsingiselo yelithi yinto ethile kwimigca "yobudenge kubo bonke". EJamani, igama elithi Kevin ludityaniswe nezingane ezisuka kwimimandla yoluntu enokufikelela okungaphantsi kwezemfundo kunokuba "umyinge" waseJamani okanye nabantu abavela kwi-GDR yangaphambili. Uyabona ukuba kutheni i-Langenscheidt-Jury yayicinga ukuba iyicalulo, nangona bayayishiya kwintcintiswano kuphela emva kokugxeka kakhulu ngokufaka kuyo kwindawo yokuqala. Kodwa, ekubeni "u-Alpha-Kevin" iholele ivoti, kwakukho ubungqina obuninzi kumabonakude asekuhlaleni, kubandakanywa isikhalazo se-intanethi esenzelwe ukubuyisela ixesha. Ngaphandle kobambiswano oluqinileyo, kubonakala ngathi "i-merkeln" iya kunikwa isihloko esithi "uLutsha iZwi 2015".
Ngoku kuya kuthi silinde ukuba sibone ukuba uKhansela u-Angela Merkel uthe ntoni ngaloo miphumo okanye ukuba uya ku "merkel" indlela yokuphuma kuyo.
Indlela yokuthetha malunga neTour de France ngesiFrentshi
Mon! - Inkcazo yesiFrentshi ichazwe
Ebonakalayo ... Kodwa engalunganga
Indlela yokusebenzisa i-French Expression "Pas de Problem"
Inyathelo Ngamanyathelo: Okokuqala Ukuthinta kwi-Soccer Play
25 Amaparelethi aMandulo aPhezulu aMandulo Awuyi Kukholelwa Abantu Ngokuqinisekileyo Ate
Iingcebiso Ezifudumele Ngothando, Ubudlelwane kunye Nesondo kunye Nomntu WeCancer
IiKlasi zeMdaniso zamaDatha e-Free
Amaphephandaba kunye neMigomo
Iyintoni Impembelelo yeMpemba?